Mhosva Kudzivirirwa kubva Kupinza kana Kuumba iyo LLC
Paunenge iwe wabatanidza iwe wagadzira chakaparadzaniswa uye chakasarudzika chepamutemo sangano. Iwe pamwe nebhizinesi rako nyowani munopihwa kodzero nemutemo wenyika uye munogona kunakirwa nezvakanakira kubatanidzwa. Izvi zvinouya nemamwe maitiro ehutongi kuitira kuti uve nechokwadi chekuti kuiswa kwako kuchakushandira iwe kana uchinge uchinyanya kuchida. Kuchengetedza bhizinesi rako bhizinesi kuri nyore, kune akati wandei matanho akakosha anochengetedza yako yakavharika chifukidziro.
"Kudzivirirwa kwemutoro kunongo simba sekuumbwa kwesangano uye kushanda nemazvo."
Paunenge iwe wapinza iwe unowana kuchengetedzwa kwe "Corporate Veil". Mune dudziro yepamutemo aya maonero kubva pachisungo chekuona kuti kambani yako ine mutoro chete pazvikwereti nezvayo zvisungo uye varidzi vayo vakachengetedzwa kubva kwavari. Izvi zvinopinda mukutamba kana mukweretesi akadenha kuvapo kwako kwakaparadzana kwekambani kuti utsvage kugutsikana kubva kuvaridzi vekambani nezvezvisungo zvebhizinesi. Kune nzira dzinoverengeka idzo chifukidziro chemubatanidzwa chakabayiwa uye isu tichavafukidza pano kuitira kuti kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita.
Kusimbisa Chifukidziro Chemubatanidzwa
Tichave tichitaura nezve mimwe mienzaniso inogona kutsigirwa nemutemo wenyaya unonyatsoratidza kana chifukidziro chemubatanidzwa chakadzivirira varidzi vekambani kubva kuzvisungo zvebhizinesi. Kungosanganisa hakuna kukwana, iwe unofanirwa kushandisa rako bhizinesi rakaparadzaniswa nevaya varidzi. Izvi hazvisi zvakanyanya kuomarara uye kungoteedzera zvekutanga nhungamiro nemaitiro zvinogona kuita mutsauko wese pasirese mushure mekupinza.
Sangano Rakanaka: Uyu muenzaniso ndicho chiito chaicho chekusanganisa bhizinesi rako. Zviripachena izvi zvinofanirwa kuitwa nemazvo. Paunosanganisa bhizinesi rako mudunhu rako, kungoendesa zvinyorwa zvako kuna Secretary nemari yehurumende hazvina kukwana. Zvichienderana nechimiro chebhizinesi chauri kusanganisa, pane zvimwe zvakakosha zvinofanirwa kuve zviripo. Kune makambani, kuburitsa stock kunobatsira kupatsanura kuzivikanwa kwevaridzi uye bhizinesi. Kuchengeta zvinyorwa zvemusangano musangano wevaridzi uye kuchengetedza izvo zvingangoita pagore hwaro chinhu chinodiwa nenyika. Kana dare rikaona kubatanidzwa kwakaremara, izvi zvinogona kufumura varidzi vebhizinesi, zvisinei kana kutenda kwakanaka kukaratidzwa pane zvimwe zvinhu zvakawanda uye poindi imwechete yakawanikwa isiriyo, panogona kuve nekuchengetedzwa kwechikwereti. Izvi zvinoenderana nezvimwe zviitwa uye kuti kana zvisina kunaka izvo zvakare. Muchiitiko chekuti bhizinesi rakabatanidzwa uye rakarongedzwa mushe musiyano wehunhu hushoma, dare rinogona kunge rakabvumidza kubvumidza zvitupa zvakasiyana kushandisa kunhau. Izvo zvinodikanwa kuisa bhizinesi rako nemazvo, kuronga uye kushandisa kambani yako zvakasiyana kuburikidza nehutongi hwekutonga.
Kusayina Zvibvumirano: Kana ukasaina gwaro rine zita rako chete, zvinogona kunge zvisina basa kuti iwe wakanyora. Chibvumirano chine mazwi ayo, chakasainwa nemapato acho sevanhu vakazvimirira zvinoreva kuti chibvumirano chiri pakati pevanhu. Kana bhizinesi rako rakabatanidzwa uye chibvumirano chiri pamwe nebhizinesi bhizinesi, chero munhu anosaina anofanira kuisa zita uye zita rezita pazasi siginicha yavo. Semuenzaniso kusaina kondirakiti na "John Doe, Mutungamiri - My Own Company, Inc" zvinojekesa kuti chibvumirano chakabvumiranwa nekuitwa nemutungamiri wenyika achimiririra bhizinesi. Kana mukweretesi akatora kondirakiti kudare rine zita remunhu uye siginecha, ipapo mukweretesi anogona kuteedzera siginecha mvumo. Izvi zvinonzi senge yemubatanidzwa chiridzwa. Paunenge iwe wabatanidza, gara uchiita zvibvumirano, zvakajeka sepakati pekambani neimwe bato.
Yakaparadzaniswa Mamiriro: Kana iwe uchinge wapinza, iwe wakagadzira munhu mutsva wepamutemo uye chete nezviito zvevashandi vebhizinesi, chinzvimbo chakaparadzaniswa ichi chinokanganiswa. Mukweretesi anoedza kuratidza kushayikwa kwehupenyu huripo uye kuteedzera zvinhu zvevaridzi zvekugutsikana. Dare richaedza hupenyu hwakaparadzaniswa nekuongorora zvinyorwa zvemakambani uye kuona kana zviitwa zvacho zvakateedzerwa pamwe nekuongorora marekodhi ezvemari kuona kuti pakange pasina kubatana kwemari pakati pesangano rakabatanidzwa nevaridzi. Imwe tsika pano ingave iri pasi pemari, izvi zvinoitika kana iwe ukabatanidza bhizinesi nemari isina kukwana kuti ugutse zvisungo zvebhizinesi zvakabvumiranwa. Kana zvirizvo, dare rinogona kuona kuti chiitiko chekambani chakagadzirwa nekuda kwechikonzero ichi uye izvi zvinoita sekunge kubiridzira.
State Zvinodiwa: Bhizinesi rega rega rakabatanidzwa rinoda kutevedzera mamwe maitiro Hurumende inoda kuti mushumo wegore negore, kana chirevo cheruzivo chinomisikidzwa pagore rekubatanidzwa. Ichi chinongova chirevo chekuti ndiani maofficial, madhairekitori uye dzimwe nguva vagovani varipo uye zviri pamutemo kero dzemabhizinesi. Kana chimiro ichi chikaregeredzwa, kumira kwako nenyika yako yekubatanidzwa kunogona kubviswa. Iyi ingangove iri nyore maitiro uye ichiperekedzwa nemari yezita.
Sezvauri kuona chifukidziro chemubatanidzwa uye kuchengetedzwa kunopihwa nekubatanidza kunogona kukanganiswa pachiitiko chekuti kambani yakaiswa zvisizvo, yakamirirwa zvisirizvo muchibvumirano kana kushanda pasina kupatsanurana pakati pebhizimusi nevaya varidzi. Izvi zvinoita basa rakakosha kwazvo mukumhanyisa bhizinesi rako mushure mekupinza.
Kubaya Chidzitiro Chemubatanidzwa
Kana iyo nguva yakazombouya apo chikumbiro chinopesana nebhizinesi rako rakabatanidzwa chakakura kudarika zvinhu zvekambani, chifukidziro chako chekambani ndicho chete chengetedzo yauinayo. Izvi zvichatangwa nemukweretesi, uyo anofanirwa kumhan'arira varidzi vekambani uye ndokumbira kuti dare ripe mutoro kune varidzi, pachezvake. Kazhinji pane nzira mbiri dzaanoshandisa mukwereta kuboora chifukidziro chemubatanidzwa.
Chinja Ego Dzidziso: Izvi zvinodzokera kumashure kune kwakaparadzaniswa kuvepo. Mushure mekupinza, kushandisa bhizinesi rako sechinhu chakaparadzana kunogona kushayisa dzidziso iyi. Kana iwe ukabata bhizinesi rako rakabatanidzwa sechinhu chakaparadzaniswa uye chakasarudzika kubva kuvaridzi vayo, vako vaakakweretesa vanozotadza kuteedzera vachishandisa iyi dzidziso. Izvi zvinogona kuve zvakapusa semugovani achibhadhara wega bhiri nekambani cheki. Kuti udzivise izvi, ita shuwa kuti kana iwe uchida imwe mari yekuwedzera, chizivisa kuburikidza nemugovani wemugovani, kana kugovera. Izvo zvakanyanya kunyorwa marekodhi ako, zvichanyanya kuoma dzidziso iyi.
Undercapitalization: Izvi zvinonyengera. Kana iwe ukabatanidza bhizinesi nemari isina kukwana mukuyedza kubiridzira vane chikwereti, ipapo chifukidziro chako chekambani chinogona kubayiwa. Kana icho chaive hwaro hwekuisa rako bhizinesi, saka ungangodaro usina kuziva chero eimwe maitiro kana. Vazhinji varidzi vemabhizinesi madiki pasi pekufungidzira huwandu hwemari hunodiwa kana vachiisa bhizinesi ravo. Kuchenjera kwaro kuve nehurongwa hwakasimba kukusimudza uye kumhanya.
Muchidimbu, uye nekuda kwenyaya iyi, isu tichafunga kuti unoronga kuisa bhizinesi rako nemazvo uye vane shungu dzekuwana mabhenefiti ekuve chinhu chakabatanidzwa. Kungo chengeta zvinhu zvakapatsanurwa, kunyora zviito zvakakosha uye sarudzo uye kuchengeta mari yekambani, mari yekambani, nemari yemunhu, mari yemunhu, unogona kudzivirira dzinenge dzese dzidziso dzeakakweretesa maitiro ekuboora chifukidziro chekambani. Zvakaoma kuti mukweretesi adaro, zvisinei ivo vanozoziva zvekutarisa uye uko vazhinji varidzi vebhizinesi vanotadza. Zvakadaro matare anonyatsocherechedza pamufananidzo muhombe uye kana bhizinesi rako rikabatanidzwa uye rikashanda nemazvo pamwe nekuita kwekutarisirwa kudiki, unogona kunge uchizobatsirwa nemutoro wakaringana.
Kuisa bhizinesi zvinoreva kuti varidzi vebhizinesi vanochengetedzwa nenyika uye mutemo wezvematongerwo enyika unodzivirira yako wega zvinhu kubva kuzvisungo zvebhizinesi. Kana iwe ukabatanidzwa, iwe ungatofanira kufunga nezvekuchengetedza bhizinesi rako kubva pane zvisingafanoonekwi. Pano isu tichakurukura dzakasiyana nhanho dzekuchengetedzwa kwemitero kune akaisirwa mabhizinesi.
Pasina kuverengerwa, muridzi webhizinesi ari 100% pachirauro chezvisungo zvebhizinesi, zvikwereti, chibvumirano chemubvumirano uye chero zviitiko zvine chekuita nebasa rebhizinesi. Paunenge iwe wabatanidza, iwe unoparadzanisa bhizinesi kubva kune ako ega zviitiko uye iwe une degree rekudzivirira. Ngatifananisei kuchengetedzwa kwemutoro pakati peMakambani neV LLC uye toona mamwe matanho ekudzivirira bhizinesi rako.
"Kuzvidzivirira kubva pachikwereti chebhizimusi zvinoreva kugadzirisa mafrining akati wandei, kuisa kunokudzivirira iwe pachezvako… inishuwarenzi inodzivirira bhizinesi rako"
Bhizinesi Dhizimusi Kudzivirirwa: Corporation vs. Yakatemerwa Dhizaina Kambani
Kana zvasvika pakudzivirira muridzi webhizinesi zvinhu zvake kubva pazvisungo zvebhizimusi, iyo Sangano uye LLC inopa zvakaenzana kuchengetedzwa kuburikidza nemutemo wenyika. Imwe mutsauko wekutanga ndeyekuti LLC inoshaya nhoroondo yakamira yekumira mudare. Makambani ane rekodhi yakaratidzirwa yemazana emakore. Chero rakarongeka zvakanaka, rinoshandiswa uye rakachengetedzwa rakabatanidzwa chimiro chebhizinesi chinodzivirira muridzi webhizinesi kubva kuzvisungo zvine chekuita nebasa rebhizinesi. Izvo zvakakosha kutevedzera kune zvinomanikidzwa kushanda zvetsika uye chengetedza zvakaparadzaniswa kupatsanurana pakati pebhizinesi nehupfumi hwevanhu Mushure meizvozvo, kune mamwe matanho aunogona kutora kuitira kuti uwedzere dziviriro inopihwa, mushure mekunge waisa bhizinesi rako.
John ane chitoro chemaruva chinotengesa zvekunze, zvakaoma kuwana uye maruva akasarudzika kunharaunda yake. Bhizinesi rake zvakare rinonunura munharaunda uye rinotora maodha makuru ezviitiko zvakakosha. Mushure megore rinononoka, John akange arova zvikwereti zvake nevatengesi vake. Kuunza zvirimwa nemaruva kubva pasirese pasirese, tungamira kune chiuru chemadhora pano uye nezviuru zvishoma zvemadhora ipapo kune yake yemaruva pombi. Kubhadhara mota uye rendi yekuhaya chitoro inoumba chimwe chikamu chemabasa ake ebhizinesi. John akatarisana nekufirita Kubhuroka uye akamisa bhizinesi rake. Chikwereti chake chebhizimusi kune vakweretesi, vatengesi nemuridzi wemba chakazara madhora zviuru makumi mashanu. Zvino nekuda kwemuenzaniso uyu, zvese zvatichazotaura ndezvekuti John akaronga bhizinesi rake muchimiro chakabatanidzwa uye akarishandisa nemazvo. Zvinhu zvaJohn, imba yake, mota, maakaundi ekubhengi uye chero hupfumi hazvigone kushandiswa kugutsa izvo zvine bhizinesi. Mune ino kesi, zvaisazove nebasa kana John aive akajairwa Corporation, S Corporation kana iyo LLC. Icho chokwadi chekuti John aive nebhizinesi rakarongeka uye rakabatanidzwa ndipo panodzivirirwa chikwereti kubva. Sangano kana LLC haizove nechero kudzivirirwa kana kushoma mune iyi kesi.
Kuzvidzivirira Kwemunhu Pachedu: Corporation vs. Yakatemerwa Dhizaina Kambani
Ngatitorei imwe tarisiro yekufananidza zvinhu zviviri izvi kubva kune imwe kona. Mune ino kesi, isu tichafunga kuti iwe, muridzi webhizinesi unomhan'arirwa pachako. Rega tiongorore zvinhu zviri panjodzi mukutonga; real estate muridzi, ma bank account, investments, mota uye yemubatanidzwa stock. Ehe, iwo masheya esheya aunazvo mukambani zvinhu zvinogona kushandiswa kuzadzikisa mutongo. Kufarira mune iyo LLC, kune rimwe divi, haina kutarisirwa seimba inogona kupihwa mukutongwa. Iye zvino pane chimwe chinhu chinonzi cheji yekuchaja uko dare rinogona kupa mutongo pane purofiti yeiyo LLC kune rimwe bato. Izvi zvakaoma, zvisinei zvinogoneka. Izvi zvinoreva kuti bato rakapihwa rakapihwa mvumo kune iyo LLC, asi mira, heino kubata - bato rinogamuchira izvo chete zvinogoverwa. Mira, zvinowedzera kuipa, bato rakapihwa rinozobatwa mutero wekubhadhara mutero pahuwandu hwebatsiro mu LLC, kunyangwe kana chero kana iyo yese purofiti yakagovewa. Izvo zvaizoita kuti kutonga uku kuve chisungo, pane kuita chinhu. Iyo LLC inogona kupa yakakwira dhigirii yekudzivirira kwemidziyo kubva kune yako wega sutu. Bhizimusi stock inofungidzirwa seimba, chero chinhu chinowanikwa nekambani chakabatanidzwa.
Kumwe Kuratidzira Kusiyanisa
Kunyangwe iwe ukabatanidza bhizinesi rako uye uchishanda zvinoenderana nehurumende uye zvemubatanidzwa, iwe unogona kuramba uchimhanya mumamiriro ezvinhu kwaunozviisa pachezvako kuzvisungo zvebhizinesi. Kunyanya kana ukasaina vimbiso yako pachako chero chinhu, chikwereti, mutsara wechikwereti, account yevatengesi, nezvimwe. Chero nguva iwe yaunopinda chibvumirano chinosunga icho chaunovimbisa pachako, bhizinesi rako bhodhi harichakuchengetedze, pachezvako, mune iro bhizinesi risingakwanise kugutsa mazwi echibvumirano. Mumwe muenzaniso kubhadhara mitero, iyo yatinofanirwa kuziva tese. IRS ichatevera bato rine mutoro muchiitiko chekuti mutero hauna kubhadharwa, bhizinesi kana neimwe nzira.
Muridzi neManeja Zvibvumirano
Chimwe chinhu chakakomba chine chekuita nesangano rebhizimusi rako mushure mekunge mabatanidza, zvakanyorwa zvakanaka zvibvumirano nemitemo. Apa ndipo paunotaura kuti kambani inofambiswa sei uye nekupa masimba kune mamaneja. Semuenzaniso, iyo LLC inotungamirwa nevatungamiriri vaviri inogona kuve nechikamu muchibvumirano chekushanda icho chinotaura kuti hapana maneja mumwe anogona kumanikidza bhizinesi kune anodarika $ 10,000 pasina kubvumirana kwemamaneja. Kana chero kondirakiti ikaitwa yakawandisa huwandu hwakatenderwa mukati memakambani emukati zvinyorwa, icho chinhu chisiri pamutemo, uko siginecha chiremera chechibvumirano chinogona kupihwa mutoro wezvisungo kwete bhizinesi. Izvi zvinogona kutungamira kune yakaoma mamiriro, zvisinei iwe uchikwanisa kudzikamisa chikwereti neumwe wako uye nezviito zvevashandi kuburikidza nezvakadzama zvibvumirano nemitemo.
Kumwe kudzora kunogona kuiswa munzvimbo ndeyekuti chikwereti chakawanda sei, kana muripo wezvemabhizimusi emari chero munhu kana chinzvimbo chakachengetwa mukambani chinogona kupinza. Kana chibvumirano chako chekushanda kana mitemo yemakambani inoraira kuti ingani cheki yekambani inogona kunyorerwa nesigine imwe chete, unogona kudzikisira kuratidzwa kwako kumatambudziko ekutonga sarudzo. Kana muridzi kana maneja wekambani achigona chete kusaina cheki yemari iri pasi pe $ 10,000 XNUMX pasina masiginecha maviri, unogona kuwedzera kuchengetedza bhizinesi. Aya marudzi ezviitiko anofanirwa kuverengerwa mune zvemukati zvinyorwa zvebhizinesi, senge zvibvumirano zvekushanda nemitemo yekambani.
Saka iwe unosanganisa, kuronga zvakaringana nehukuru hwakakura kune ako epamukati zvinyorwa. Chii chinoitika panowira njodzi? Moto, mafashama, kana mhosva? Apa ndipo panotangira inishuwarenzi. Pasina iyo, iwe unozoita kutarisana nekurasikirwa kwenhamba iyo inogona kuisa bhizinesi diki pasi. Zvichida chiitiko chingamanikidza bhizinesi kuchengetedza masuo aro kuvharwa kwemwedzi yakati wandei, izvo zvinogona kuvhara masuo pabhizinesi diki.
Inishuwarenzi inogona kuve chishandiso chikuru kubatsira kudzikisira mutoro mune dzimwe nzvimbo. Kune matani acho, chigadzirwa mutoro, kuba, moto nemafashama. Vashandi nenzvimbo dzebasa vanofumura bhizinesi kune chikwereti chakakura chinofanira kugadziriswa. Kutsvaga mhinduro yakanaka kune izvi inoshanda nezvido zvako uye huwandu hwechikwereti zvinogona kureva kungova neinishuwarenzi yakakwana.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaGunyana 29, 2015